Famerenana sary taloha miaraka amin'ny Photoshop hanomezana fiainana vaovao | Famoronana an-tserasera
Mamerina sary taloha miaraka amin'i Photoshop hanome fiainana azy Nahazo mitahiry sary taloha izany dia nino fa very noho ny fandehan'ny fotoana sy ny vokadratsiny amin'ireo sary taloha izay tsy dia ampy ny teknolojia noho ny ankehitriny. Betsaka amintsika no manana sary fahazazana any an-trano miaraka amin'ny sasany tasy, ketrona na karazana fahadisoana izay tianay ho azo amboarina rehefa manao nomerika ny sarinay. Photoshop mety ho ny famonjena noho ny olantsika.
Mianara amboary ny sarinao taloha amin'ny fomba tsotra miaraka amin'ny Photoshop mampiasa ny sasany amin'ireo fitaovana mahazatra indrindra rehefa manao an'io karazana asa io. Amboary ny bibikely, manatsara ny loko, mamita ny sarinao ary mamelombelona ny sary ny fahazazanao.
Para mamerina sary Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mijery azy tsara ary manapa-kevitra ny amin'ny fomba hanatanterahana ny famerenana amin'ny laoniny ka azo tanterahina araka izay azo atao, izay matetika atao amin'ny famerenana amin'ny laoniny dia ny maka tahaka ireo faritra salama nefa tsy miharatsy ary apetaho amin'ny faritra misy azy ireo. mihasimba. Izahay dia mijery tsara ny sarinay ary manapa-kevitra ny amin'ny fomba hanaovana ny famerenana amin'ny laoniny.
Raha vao miditra Photoshop Ny zavatra voalohany hataontsika dia ny misafidy iray famerenana fitaovana, Photoshop manana izao manaraka izao:
Ny tsirairay amin'ireny fitaovana miasa amin'ny fomba hafa ary manana ny tsara sy ny ratsy teboka, noho izany antony izany no idealy atambaro izy ireo rehetra arak'izay ilaintsika.
Hazavainay ny fomba fiasan'ny sasany amin'izy ireo sy ny fomba fanatanterahana ny famerenana amin'ny laoniny ny sary amin'ny dingana maromaro.
Manitsy ny tsy fahombiazana ara-batana ny sary (tasy, tapaka ... sns)
Faharoa manitsy ny glitches loko ny sary (loko, jiro, aloka ... sns)
Ny tapany voalohany amin'ny famerenana amin'ny laoniny dia tokony hifantoka amin'ny fanitsiana ireo lesoka ara-batana sy ny ampahany faharoa amin'ny fahasimban'ny loko marina hiverina any manome fiainana ny sary.
Andao atomboka ahitsiho ny bibikely miaraka amin'ilay fitaovana buffer clone, ny ataon'ity fitaovana ity dia ny maka santionany amin'ny sary ary adika amin'ny toerana hafa. Tsy maintsy ataontsika ao an-tsaina foana ireto lafiny manaraka an'ity fitaovana ity: tsy fahampiana, fivezivezena ary hamafisan-doha. Ny zavatra mahazatra dia ny milalao amin'ireo lafin-javatra ireo ataovy milamina tsara ilay retouchingl, ny ambany ny opacity sy ny hamafin, ny kely kokoa ny retouch dia ho tsikaritra. Mampiasa an'io fitaovana io izahay fanindriana ny fanalahidy alt haka santionany sary, aorianay dia alainay amin'ny toerana hafa amin'ny sary ilay santionany, ny tena mety dia ny maka santionany akaiky ny faritra misy ny kopia.
La fitaovana patch mamela antsika hanao safidy ary avy eo mamorona karazana patch, ity fitaovana ity dia misy safidy roa: ny fiaviany sy ny toerana alehany, ny safidy voalohany dia mamela antsika hamorona a Safidy diso ary ovao ity faritra ity ho iray izay tsy simba. Ny safidy faharoa dia ahafahantsika manao ny mifanohitra amin'izay, adikao ny hadisoana voafantina ary averinay any amin'ny faritra hafa (ho an'ity tranga ity dia tsy mahasoa ity ampahany ity). Tsotra ny fandidiana, izahay dia mifantina ny faritra tianay haverina ary avy eo dia sintomintsika any amin'ny faritra tsy simba eo akaiky eo io safidiny io.
Tokony hitandrina isika tazomy ireo fisongadinana sy aloky ny saryNy ampahany tsirairay dia manana hazavana sy aloka iray, noho izany antony izany, ny santionany izay ataontsika dia tokony ho akaiky ny lesoka hitazomana izany. Ohatra ny manamboatra ny faritry ny maso tsy maintsy manangona santionany eto amin'ity faritra ity fotsiny isika.
Hanala ny sisiny tapaka (raha misy azy ireo) ny zavatra azontsika atao dia ny hanafohezana ny sary kely miaraka amin'ny fitaovana fambolena.
Raha vantany vao nahitsinay ny lesoka ara-batana amin'ny sary dia manomboka ny zavatra manaraka tokony hataontsika loko marina, noho izany dia manana andiana fitaovana izahay.
Para manitsy volo sy faritra feno tsipiriany ny idealy dia ny fanaovana a fifantina amin'io faritra io hitsaboana azy io avy eo, io dia azo atao amin'ny fitaovana sarontava haingana. Toy ny hoe borosy io, dia nolalainay ny faritra tiantsika ahitsy (afaka miloko mena ho azy izy io) aorian'ny nanaovana ilay fifantenana, dia tsindrio indray ilay kisary maska ​​haingana ary hamorona safidin'izay rehetra tsy nolokoinay, Noho izany antony izany dia tsy maintsy mandeha any amin'ny menio ambony ianao ary tsindrio ny fisafidianana / mivadika mba hijanonana afa-tsy amin'izay nofidinay tamin'ny borosy.
Manaraka izany dia mamorona sosona fanitsiana / fanitsiana mifantina. Afaka manao an'ity fizarana ity isika marina loko manokana. Ity ampahany ity dia azo ampiharina amin'ny faritra tsirairay amin'ny sary raha te hanitsy ny loko mazava kokoa isika. Ny tsara indrindra rehefa manao izany isika dia ny fampiasana hamafin'ny borosy ambany ho an'ny sisiny ary hamafin'ny atiny ho an'ny atitany.
Ny zavatra manaraka azontsika atao manatsara ny kalitaon'ny fahitana ny sarinay dia ny fampiasana ny sasantsasany amin'ireo safidy azonao atao Photoshop hanitsiana sary:
Azontsika atao ny mampiasa ny sasany amin'ireo fitaovana ireo amin'ny manitsy bebe kokoa ny kalitaon'ny sarinay. Ireo fanitsiana rehetra ireo dia azo atao tsara raha mbola manao ny dingana maska ​​haingana aloha isika.
La tolo-kevitra rehefa manao famerenana amin'ny laoniny Miezaka ny manao azy tsikelikely, mifantoka tsara amin'ny antsipiriany ary manandrana miasa foana ny faritra tsirairay misaraka amin'ny safidy voafantina. Tsy manana fialantsiny intsony ianao hamerenana ireo sarin'ny fianakaviana rehetra anananao ao an-trano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Avereno sary taloha miaraka amin'ny Photoshop